Warri Dheessee Hin Beeynee Dhufe Election2020 !! - Kichuu
HomeAfaan OromooVideosWarri Dheessee Hin Beeynee Dhufe Election2020 !!
Warri Dheessee Hin Beeynee Dhufe Election2020 !!
Warri Dheessee Hin Beeynee Dhufe
OMN GRD: Yaada PP’n ala Itoophiyaa bulchuun hin danda’amuu? (Amajjii 3, 2020)
ABO’n sababa araara Mootummaa Itoophiyaa EPRDF waliin waliigalee biyyatti deebi’een hedduu hubame. WBO 1300 Mootummaatti kennee #Ardaayitaatti akka hin taane ta’anii fafaca’anii hafan. Qondaalonni ABO sababa araara kanaan biyya galan kanneen akka Kol. Gammachuu Ayyaanaa hidhaatti darbatamanii gidirfaman. Maqaa WBO hiikkachiisuutiin shira Jawaar Mohaammad fi Baqqalaa Garbaa keessatti hirmaataniin WBO diiguuf yaalamee luluqqisaatiin WBOn 800 ta’u qawwee hiikkatee gale. Miseensonni WBO kun Xollaayitti summii nyaachifamanii kan dhumanii oolan hafan. Isa booda akka kosii gataman. Kana qofaa miti ABO fi WBOn kan dur hayyu-duree tokko jalatti taliigaman gargar citan. Kun cabiinsa guddaadha. Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessattis salphina malee jabina hin jedhamu. Jaarmiyaan waraana waggaa 45 ijaaree ‘leenjisee, abbaa fi haadha ta’ee guddisee bobbaase battalatti ka’ee adda cituu jechuun ulfaataadha.
ABO nis akka jaarmiyaatti Finfinnee haa jiraatu malee hidhaa keessa gale. Qondaalonni ABO hedduun hidhaman; sochii fi waajjira banachuunillee hin danda’amne ture. Miseensonni; deeggartoonni ABO fi sabboontonni kumaatamaan mana hidhaatti guuraman. Haa ta’u malee , ABO n qormaata ulfaataa kana hunda keessa darbee amma xinnoo bayyaannatee sosso’uu eegalee ture. Boordii filannoo irraas eeyyama argatee filannoof qophii eegalee waajjira isaa bakka hundatti banachuu eegalee jira. Haaluma kanaan itti fufee Oromiyaa guutuu keessatti kaadhimamtoota isaa dhiyeeffachuuf humna qaba jedheen yaada. Walloo fi Matakkalittis dhiyessachuufis waanti isa dhorku hin jiru. Naannoolee biraatiif ammoo PAFD uummatee jira.
Garuu qormaata guddaa kana hunda dandamatee ba’ee erga daandii qajeelaarra bu’ee booda ammas ABOn rakkoo biraatti of galchuun isaa baay’ee nama gaddisiisa. Maqaa #tumsa jedhuun shira Jawaar Mohaammad xaxuu fi kiyyoo inni hidhe keessatti seenuun dogoggora guddaadha. ABO’n maqaa tumsaatiin KFO fi PBO waliin hojjechuuf walii galuun isaa dhaabni kun rakkoo hin dadhabuu nama jechisiisa. Mee ABO n jara kana waliin tumsa uumee maal buufata?? Maal haa baasuuf dhama raasu! Filannoon jiraachuun isaayyuu hin beekamu malee ABO n maqaa mataa isaan #ABO jedhamee dirgomuu qaba malee maqaa tumsaa wayiin dorgommiitti dhiyaachuun ofiin of ajjeesuudha. Oromoon ABO caalaa eenyuunuu hin jaallatu ; ABO filata malee nama dhuunfaa miti. ABO n kaayyoodha. Kaayyoo ABO isa taliila makaa godhanii dhiyeessuu bu’aa hin qabu
Tafarii Zarfuu -Tokkummaa Jabeessaa – New Ethiopian Oromo Music 2019 [Official Video]
Mucayyoo Waggaa 5 Siinaaf Asaffaa **Wabii** New 🎶Oromo 🎶 Music 2020.
Sagantaan keenya Jimaata galgalaa eegaleera. Itti dhiyaadhaa!